बोटोक्स सुईं लगाएपछि ज्यान गुमाउने महिलाको पहिचान खुल्यो
एससीएमपी November 13, 2018
बोटोक्स सुईं लगाएपछि सोमबार ज्यान गुमाएकी महिला बैंकर भएको खुलेको छ ।
प्रहरी श्रोत अनुसार मृतक नीजि स्वीस बैंक जुलियस बारकी प्रबन्ध निर्देशक ५२ वर्षिय जोय च्योङ शुक-लिङ हुन् । चीम चा चुईस्थित ८६ वर्षिय डा. फ्र्याङ्कलिन ली वाङ-पोङको क्लिनिकमा अचेत भएकी च्योङलाई सोमबार बिहान क्विन एलिजाबेथ अस्पतालमा मृत घोषणा गरिएको थियो ।
याउ चीम डिस्ट्रिक्टका चीफ ईन्स्पेक्टर लाम युएन-लिङले क्लिनिकमा खतरनाक औपधी भेटिएको र कानुन अनुसार औषधीको मात्रा लेखाजोखा गर्ने खाता नराखिएको बताए । डा. लीलाई खतरनाक औषधीको प्रयोग सम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको र प्रहरीलाई गलत सूचना दिएको शंकामा गिरफ्तार गरिएको छ । प्रहरी हिरासतमा रहेका ली धरौटीमा रिहा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मृतक च्योङ प्रबन्ध निर्देशकका साथै बैंकको वरिष्ठ जनसम्पर्क प्रबन्ध रहेको जुलियस बारले पुष्टि गरे पनि थप प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
“उनको परिवारलाई हामीले गहिरो समवेदना पठाएका छौं । हामी थप प्रतिक्रिया दिन चाहन्छौं,” एक प्रवक्ताले बताईन् । हङकङमा चिकित्सकले अवकाश पाउने उमेर तोकिएको छैन । मेडिकल काउन्सिलको रजिष्टरमा नाम दर्ता रहेसम्म उनीहरुले अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था छ ।